Ubuhle | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Indlela yokwenza umthamo womntu ekhaya. Iingcebiso
ezaposwa ngomhla 04.09.2018
Isipikili esikhazimlayo siziva siqhelekile. Ke ngoko, abantu basetyhini abanemfashini banesizathu esifanelekileyo sokwahlula uyilo. Matte manicure ngumbono osandula ukuvela. Ngokuthe ngcembe, olu luyilo lweenzipho luphumelele ...
Amafutha "Imfihlo kaVictoria" (Imfihlo kaVictoria): uphononongo, amaxabiso
Igama eliyimfihlo laseMelika uVictoria's Secret lizinikele ekwenzeni iziqwenga ezintle nezinuka kamnandi. Ngokusisiseko, olu hlobo luvelisa ingqokelela yeengubo zangaphantsi ezimnandi zodidi "lokunethezeka", kunye ne ...
Uyenza njani i-manicure enemingxunya?
Izandla zabasetyhini kufuneka zihlale zikhangeleka zicocekile kwaye zinomtsalane. I-manicure yinqanaba lokugqibela lendalo yesitayile. Unokuwuzalisa ngokugqibeleleyo umfanekiso othile, okanye unokungafaneleki kwaphela. Kule nqaku ...
I "tattoo" yomvambo: yintoni intsingiselo eyimfihlo yalo mfanekiso?
Ungabonakalisa ubuqu bakho ngeendlela ezahlukeneyo: umntu othile ukhetha ukuyenza ngesandla, ukwenza izinto zoqobo kunye nezinto ezizodwa, umntu ukhetha ukuthenga aze abonakalise isitayile sakhe ngeempahla, umntu akhethe apho ...
Isicwilisi sesinki esinesitatshi (isithunzi)
Umbala we-mint sele uqatshelwe njengesiqhelo sexesha elizayo. Abaqulunqi befashoni kwihlabathi liphela basebenzisa lo mthunzi uluhlaza okhanya-luhlaza kwingqokelela yabo entsha. Awusindiswanga ngumthunzi omnandi kunye nezipikili zefesitistas, kuba i-manicure yintsimbi ...
Alien - isiqhumiso Thierry Mugler. Ukwenziwa kwesiqholo, ivumba elimnandi kunye nokuphononongwa kwabathengi
Namhlanje siza kuvavanya iindidi ezintathu zeemveliso zendlu kaThierry Mugler ebizwa ngokuba ngumphambukeli: isiqholo (okanye mandithi, eau de parfum) "Alien" kunye nabantakwabo abancinci abancinci- "O Extraordinare" kunye no "Sanness". Akunakutshiwo ukuba ...
UTom Ford (iziqhumiso zamadoda nabafazi): ukuphononongwa kwabathengi kunye neengcali
UTom Ford ngumntu owaziwayo, onamabhongo kunye noqobo ophumeleleyo kulwalathiso lwefilimu, uyilo kunye nesiqholo. Le ndoda yenza ubukhosi ngezandla zayo kwaye yafumana igama lesidlaliso "inkosi engenakuphikiswa". Nangona kunjalo, ayisiyiyo kuphela ...
Isixhobo se-LPG (ukuhlalisa): ukuphononongwa
Inkqubo yokubuyiselwa kolusu okanye yokuthanjiswa kwe-LPG yaqala ukusetyenziswa malunga neminyaka engama-30 eyadlulayo. Umatshini we-LPG waphuhliswa yinjineli yaseFrance emva kokuba efumene ingozi kwaye kwafuneka athathe ikhosi ...
Indlela yokukhetha i-eyelashes yokwandiswa?
I-eyelashes ende e-fluffy yenza ukuba ibhinqa libukeke ngakumbi kwaye liyimfihlakalo ngaxeshanye. Abo ngokwemvelo babengenathamsanqa ngokwaneleyo ukuba banokufumana le nkonzo bangayisebenzisa. Zininzi iisalon ezinikelayo ...
Ikhampasi ayinakuphinda ibuyiselwe endleleni. Kungenxa yesi sizathu le nto abahambi abaninzi abanomdla behombisa imizimba yabo ngeetattoo ezimibalabala ezinomfanekiso wakhe. Ikhampasi yitattoo eyenziweyo kungekuphela nje ngabazulazuli bezothando, kodwa ...
Idayi Rowan iinwele: imibala zemibala, ncomo
Idayi yeenwele zeRowan, iphalethi yayo ebonisa amantombazana malunga namashumi amathathu eemibala eyahlukeneyo, ithandwa. Zininzi izizathu zoku. Abasetyhini abasebenzisa i- "Rowan" qaphela ukuba ayibizi, ayinaphunga, hayi ...
Isiseko seMax Max Factor. Ikhumba lakho liphelile
Akunakwenzeka ukuba kukho enye intombazana encinci ehlabathini eyanelisekile ngokupheleleyo ngokubonakala kwayo. Ikhona into engalunganga. Kodwa amaxesha amaninzi amantombazana awonwabanga ngolusu lwawo, ayothusi le meko yangoku ...
I-Pilki nail (SPb): ulwazi, iidilesi, ukuphononongwa
Kutshanje, kunokwenzeka ukufumana i-manicure kuphela kwiisalon eziphezulu kunye nexabiso eliphezulu kakhulu. Amaxesha ayatshintsha, intengiso yenkonzo iyakhula. Nangona kunjalo, umyinge wexabiso kunye nomgangatho kwishishini lezikhonkwane, nokuba ...
Isiseko se "Faberlik", "Double agent": uphononongo. Iimfihlo zobumba
Isiseko sesinye sezona zinto ziphambili kwingxowa yabasetyhini yokuthambisa, ekungekho nto yokwenza ngaphandle kwayo: yonke imihla okanye ngokuhlwa. Sisifihli esinokufihla ukungafezeki kolusu, ukudinwa ...
Ivetiver fell like? Ukutshiza oko kubonakala ngathi?
Yintoni esi siqholo - vetiver? Linjani ivumba? IVetiver ngumfuno osuka kusapho lweesiriyeli, ukukhula okukhula ngokukhawuleza okunokuphila ukuya kwiminyaka engama-50 okanye nangaphezulu. ...
Mask face face: ukupheka iindlela, zokupheka, ukuhlolwa
Ngokuqhelekileyo sicinga ngeziqholo njengezongezo kukutya. Kodwa kumazwe amaninzi asempuma baphathwa ngendlela eyahluke mpela. Abantu abahlala apho babenza izithixo kwaye bazithatha njengezona "zipho zoothixo." ...
Indlela yokukhulisa i-bang ukuze ingaphazamisi? Ukunyamekelwa kwabantwana kunye nomzobo
Ngaphandle kwamathandabuzo, ii-bangs ziya kuba sisandi esiqaqambileyo saso nasiphi na isitayela seenwele. Ngamanye amaxesha ufuna ukwahlula umfanekiso. Kodwa indlela yokukhulisa i-bang ukuze ingaphazamisi, ayibangeli ukuphazamiseka kwaye, ekugqibeleni, ayonakalisi imbonakalo yemihla ngemihla ...
Iimfestile zefestile zebhola
UDavid Beckham, uCristiano Ronaldo, uLionel Messi kunye nabanye abadlali abaninzi bakhunjulwa ngathi kungekuphela komdlalo wabo wokuqala, kodwa nakwizinwele zabo ezingaqhelekanga. Ngaphandle kweetalente zezemidlalo, banikwe ingcamango enkulu yokunambitha. Malunga…
I-gel iphosa ixesha elingakanani kwizipikili? Iindleko zomntu, ukuhlaziywa
I-manicure entle kwaye ehlala ixesha elide liphupha lamantombazana amaninzi. Kwaye kwaba yinyani ngokufika kweepolishi zejel ezihlala ixesha elide njengejel yolwandiso lwesikhonkwane kwaye kulula ukuyisebenzisa njengepolishi yesikhonkwane. Igqibelele ...
Yintoni kunye nendlela yokugubungela inxeba ngaphantsi kweso?
Ihematomas (imivumbo) yenye yeengxaki ezibuthathaka, ngakumbi kwiimeko apho zingenakufihlwa eluntwini. Inkqubo yokubonakala kwe-hematoma ilula: emva komonakalo kwizithambile, ngakumbi izicwili ezibuthathaka okanye ...
Imibuzo ye-81 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,949.